Baolina kitra- CHAN :: Hifandona amin’i Mozambika i Madagasikara • AoRaha
Baolina kitra- CHAN Hifandona amin’i Mozambika i Madagasikara
Tontosa, afak’omaly, tany Ejipta, ny antsa­paka amin’ny fifa­nintsanana hiatrehana ny dingana famaranan’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, amin’ny taranja baolina kitra, tsy misy mpila ravinahitra na ny CHAN. I Mozambika no hifanandrina voalohany amin’i Madagasikara.
Firenena dimy amby efapolo no hiady toerana handray anjara amin’ny dingana famaranan’ny CHAN 2020, hatao any Etiopia. Firenena telo no hisolo tena ny Faritra atsimon’i Afrika. Tsy handray anjara amin’ny dingana voalohan’ny fifanintsanan’izany faritra atsimo izany i Madagasikara, araka ny vokatry ny antsapaka. Any amin’ny dingana faharoa kosa vao hiditra an-tsehatra ny Barea ka hifanehitra amin’ny Mambas, avy any Mozambika.
Raha mandresy ny Mozam­bikana ny Malagasy, dia hia­ka­tra eo amin’ny dingana fahatelo farany. Azo lazaina ho mora kokoa ny lalana miandry ny ekipam-pirenena fa tsy toy ny tamin’ny taona 2017.Raha tsiahivina dia nandalo ny dingana rehetra i Madagasikara, tamin’ny 2017. Tsy resy mihitsy ny Barea raha tsy tamin’ny lalao farany teo amin’ny dingana fahatelo, tany Angola. Niteraka fahadisoam-panantenana goavana izany ho an’ireo mpilalao sy ireo mpankafy, izay nanantena mafy fa ho tafakatra amin’ny CHAN, tamin’izany fotoana izany.
Firenena enina ambin’ny folo no handray anjara amin’ny dingana famaranan’ity fifaninanana ity, izany hoe ny mpampiantrano sy firenena dimy ambin’ny folo hafa. Mbola tsy fantatra hatreto ny datin’io fifaninanana io. Mbola tsy voafaritra ihany koa ny datin’ireo lalao fifanintsanana.
Kanton’ny fahiny :: Hisy ny fanamby lehibe eo amin’ ny tontolon’ny famokarana mpihira gasy